Totohondry vola | NewsMada
Lalao madio ? Tsy misy amin’ny politika izany. Tsy misy amin’ny politika eto Madagasikara aloha, ary tsy hita antenaina ny mety hisiany any aoriana any. Tsy misy afa-tsy kapa vavaranjo, vely kibay, daka tsy hita maso fa indrindra, ny tsatoka antsy an-damosina no misy eto, raha resaka politika.
Ny mpirahalahy omaly, nanjary mpirafy. Ny mpifahavalo fahiny, lasa mpifankatia… satria politika noy hatao. Tsy olana izany rehetra izany satria fomba fiady sy fanao eo amin’ny politika avokoa. Mila mazava kosa anefa ilay foto-kevitra ijoroana, farafaharatsiny tsy hahatonga ny mpandinika tsy hitsara avy hatrany amin’ny hoe babon’ny vola.
Re teny an-kianja teny, ary misy mihitsy ireo nijoro vavolombelona, fa mampiasa vola ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Miezaka mamono afo tsy hiitaran’ny krizy. Miezaka ihany koa mifikitra amin’ny seza, farafaharatsiny hatramin’ny fahatongavan’ny fifidianana. Misy rahateo ny mpanam-bola izay efa mpampiasa vola amin’izany, hatramin’izay.
Tsy takona afenina izany raha ny zava-misy, satria tsy miova ilay fomba fanao. Ny fironana politika angaha no mitsimbadibadika eo. Kitihina ny mpino any am-piangonana hatramin’ny ankizy mpianatra any an-tsekoly. Alefa ny karazana fampandriana adrisa sy mena miraviravy. Mandeha koa anefa ny ramatahora sy ny didiko fe lehibe…
Manjaka ny totohondry vola. Izay voa ny vavany, mangina. Izay tsy voa kosa, mbola mitolona eo ihany… Misy tokoa mantsy amin’ireo mpitolona ny manara-driandranno fotsiny. Tsy vitan’izay fa manao izay ahitan’ny olona sy hisongadinana, sao misy mamely “totohondry vola” ihany ny farany.
Fa ao ambadik’izao rehetra hita sy re izao, misy Malagasy antapitrisany maro, tsy manantena betsaka, fa maniry izay sahaza ho an’ny andavanandrony fotsiny… Mbola mafy ny adiny.